विरोधीहरूप्रति झन क्रुर बन्दै ओली, लोकप्रियताको ग्राफ घटेर शून्यतिर ! | Online Nepal
विरोधीहरूप्रति झन क्रुर बन्दै ओली, लोकप्रियताको ग्राफ घटेर शून्यतिर !
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा देख्न चाहनेको संख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला ओली जति लोकप्रिय थिए, उनको लोकप्रियताको ग्राफ घटेर शून्यतिर जाँदैछ ।
वाम गठबन्धनका बोलेका कुरा ओलीले सबै भुलेका छन् । घोषणापत्रअनुसारका कुनै पनि काम गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकीकरण गर्ने भनेका थिए । त्यो पनि गरेनन् । रेल, पानीजहाज, घरघरका चुल्होमा पाइपबाट ग्यास आदि जस्ता आश्वासन दिएका थिए ।
ओलीले ती आश्वासनलाई पूरा गर्ने कुनै छनक ल्याएका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री पद जतिबेला पनि फुत्किन सक्ने देखेर डीपीआर नै तयार नगरिकन धमाधम शिलान्यास गरिरहेका छन् । ओलीमा अहिले शिलान्यासको भुत चढेको छ ।
प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी हल्लिएको थिएन भने ओलीले यसरी हतार–हतारमा बालुवाटारमा डीपीआर नै नभएका आयोजनाहरूको उद्घाटन गर्ने थिएनन् ।
ओलीले दैनिक सरह मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर धमाधम राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति खाली राख्ने पक्षमा ओली छैनन् । सबैमा आफ्नो भजन गाउने भजनमण्डलीहरूलाई भर्ना गरिरहेका छन् । ओलीले गरिरहेको हतारको काम र निर्णयलाई उनको बहिर्गमन नजिक आउँदैछ भन्ने संकेत गरेको छ ।
ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरूबाट भएको छ । आफ्नो विरोध गरेको भन्दै ओलीले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई कारबाही गरेका छन् ।
ओलीले आफ्नो आलोचना भएको रुचाउँदैनन् । आफ्ना विरोधीहरूप्रति ओली अत्यन्तै क्रुर छन् । ओलीले देखाएको हर्कतबाट एमालेलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । ओली सुध्रिने पक्षमा छैनन् ।
आफ्ना विरोधीहरूले समानान्तर गतिविधि गरेपछि ओली भित्रभित्रै डराएका छन् । ओलीले डराएको छनक दिएका छैनन् । तर, विरोधीहरूलाई फुटाउने अभियानमा भने लागेका छन् । आफ्ना समर्थकहरूलाई ओलीले सक्रिय बनाएका छन् । ओली माधव नेपाल समूहसँग निकै डराएका छन् ।
नेपाल समूहलाई फुटाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई झलनाथ खनालको निवासमा पठाएका छन् । खनालले ओलीको हर्कतबाट दिक्क भएर भण्डारीलाई लोप्पा खुवाएर फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
भण्डारीले मर्यादाको ख्याल नै नगरेर एमालेका नेताहरूको घरमा जानु राष्ट्रपति पदको आचारण विपरितको कार्य हो ।
भण्डारीले यसअघि पनि ओलीको राजनीतिका लागि नेताहरूलाई शीतल निवासमै बोलाएर मिलेर जान दवाव सिर्जना गरेकी थिइन् । उनको राजनीतिक सक्रियतालाई धेरैले मन पराएका छैनन् । भण्डारीमा सुधार आउनुको साटो झन् एमालेका नेताको घरमा जान थालेकी छिन् ।
ओलीको सत्ता धरमराउन थालेपछि सबैभन्दा धेरै समस्या भण्डारीलाई भएको चर्चा हुन थालेको छ ।
ओली र भण्डारीको गतिविधिलाई नेपाल समूहले कुनै न कुनै विन्दुमा लगाम लगाउनेछन् । नेपाल समूहले सकेन भने पनि अर्को समूहले ओली–भण्डारीलाई सहि ठाउँमा लगेर राख्नेछ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डाके सर्वदलिय बैठक
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट नहटाएसम्म देशले मुक्ति नपाउने कांग्रेस नेता सिंहको टिप्पणी
माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको ढिलासुस्ती नसहने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी
नेपाललाई आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन ओलीको आग्रह
प्रचण्डलाई ‘सिसिमा औषधि बेच्ने’ भन्दै ओलीले गरे व्यङ्ग्य, सरकार ढाल्ने खेल असफल पार्ने चेतावनी
कोरोना बढेसँगै प्रधानमन्त्रीले भने – देश नै ठप्प पार्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ
ओलीको प्रश्न – प्रतिगमन भनेको ख्याल ठट्टा र स्याल ह्युइयाँ गर्ने हो ?
राज्यका अनुदानलाई ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
सरकार र संसद नचले फेरि पनि विघटन हुने ओलीको चेतावनी